10 Fahaverezana eo anelanelan'ny fihazakazahana sy ny fihodinana
Hobbies & Activities Paddling
Ireo Top 10 Difference Anelanelan'ny Rowing And Paddling
Tsy mihambahamba ny sakelidrano sy ny lakozia!
Ho an'ny olona maro, dia mitovitovy ny fihodidinam-bolo sy ny fihodinana. Milaza izy ireo fa handeha hamandoana lakana izy ireo ary miantso ny fiarandalamby. Raha ny marina, misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny làlana sy ny lakozia na ny kayak noho ny semantika.
Mazava ho azy fa misy fitovozana kely toy ny hoe mipetraka anaty sambokely midedadeda amin'ny tànana misintona sy manosika lelavola amin'ny rano, na ny sambo afaka atao solo na miaraka amin'ny hafa ao anaty sambo.
Saingy, ara-teknika, izany no mahatonga ny firaisana eo amin'ny fanatanjahantena roa ary ny fahasamihafana eo amin'ny fihazakazahana sy ny fiaramanidina dia miharihary.
Fifanakalozana eo anelanelan'ny fihazakazahana sy ny familiana
Ny fomba tsara indrindra hanasongadinana ireo fahasamihafana dia angamba ny lisitra tsotra fotsiny. Taorian'ny famakiana an-tsokosoko ireo tohatra ireo dia ho lasa mazava tsara fa ny lakandrano sy ny lakozia dia toy ny fanatontoloana samihafa toy ny sambon-dranomasina, sambo mpikorisa, ary sifotra. Hanampy anao amin'ny fahatakaranao ny Lalao Olaimpika Olympika / Kayak sy ny Lalao Olaimpika .
Ny fahasamihafana voalohany eo amin'ny padding sy ny fandrobana dia ao anatin'ny rafitra izay ampiasaina hanohanana ny sambo. Ny paddles dia ampiasaina amin'ny familiana. Ny hafa dia ampiasaina amin'ny familiana. Ny fiarandalamby dia manosika sambo toy izany eo amin'ny fiaramanidina. Ny hafa dia manosika sambo amin'ny lalana mifanohitra amin'ny fomba ipetrahan'ny mpamafy.
Eo amin'ny andaniny mitovy amin'ny fahasamihafana voalohany sy ny fametrahana izany amin'ny teny voafaritra kokoa, midika izany fa mandroso ny mpiambina rehefa ny mpitaingina dia mandeha miverina.
Ny paddles dia tsy mifamatotra amin'ny zavatra rehetra. Mivezivezy malalaka amin'ny rivotra izy ireo ary tsy manohana afa-tsy amin'ny tànan'ny mpitaingina. Ny zana-bary nampiasaina tamin'ny fiarandalamby dia mifamatotra amin'ny sambo niantsoana azy. Izy ireo dia mipetraka ao amin'ny rindrina izay manatanteraka ho toy ny fefy ho an'ny fanosehana sy ny fisintonana mihetsika.
Ny fomba fiasan'ny fiarandalamby sy ny familiana dia samy hafa tanteraka. Ny fikorontanan'ny familiana dia tarihin'ny tadin'ny mpiady. Ny tongotra sy ny sandriny no tena fototry ny lozam-pifamoivoizana.
Mba hamela ny tongotra hanao ny asa amin'ny alàlan'ny familiana ny seza ao anaty sambo sy sambon-kisoa dia mihodina any aoriana sy any aoriana mba hamela ny tongotra hanosika sy ny famelezana. Ny seza ao anaty kayak, lakana ary sambo dia mijanona.
Mpivarotra lakana, lakana , sambon-danitra, ary fiarandalamby. Ny mpitaingina dia mamoaka sambo, sambo, ary sambo maro.
Amin'ny tranga miavaka sasany dia misy ny fantatra amin'ny hoe coxswain, na tsotra fotsiny. Ity olona ity dia mipetraka ao ambadiky ny sambo ary izy irery ihany no ao anaty sambo izay miatrika ny dian-tongotra. Ny kôpôsy dia tsy manova zavatra hafa. Raha ny tokony ho izy, io olona io dia miandraikitra ny hitantana ilay sambo sy hitazona ny fotoana hiasan'ny mpikambana ao amin'ny ekipa. Mazava ho azy fa tsy misy mpikambana toy ny ekipa amin'ny fitaterana lakana sy kayak.
Afaka mamindra sambo iray miaraka amin'ny lamosina iray monja ny mpitaingin-tsoavaly ary amin'ny lafiny iray raha tiany. Amin'ny làlana mankany amin'ny làlana dia misy lelatra roa no ilaina, ny iray amin'ny lafiny iray amin'ny sambony mba hampiato ny sambo amin'ny tsipika mahitsy.
Azonao atao ny milefitra ao an-tokantranonao na ao amina toeram-pisakafoanana amin'ny fampiofanana mpitaingin-tsoavaly. Tsy misy mpampiofana entana na fomba iray hampiharana tsara ny fomba famandrihana ao an-trano.
Ny lakana sy kakazo mandehandeha dia fialam-boly mahazatra kokoa izay azon'ny olona midadasika kokoa noho ny fiarandalamby na sambokely.
Koa, ankehitriny ianao dia mieritreritra ny fahasamihafana eo amin'ny fanatanjahan-tena sy ny fanatanjahantena toy ny lakana ary ny kayak. Zava-dehibe ny manamarika fa io lisitra io dia maneho fahasamihafana fotsiny ary tsy fanamafisana ny tsara kokoa. Izy ireo dia samy manao fanatanjahan-tena ary tsy misy fomba goavana ny mamaritra izay tsara kokoa amin'ny heviny.
Paddle Float Tutorial - Ahoana ny fomba hanavotana ny tenany amin'ny fampiasana ranomandry?
Inona no tombony amin'ny karazana IV PFD?
Lisitry ny Ratting sy ny Rafting River
Ahoana ny fomba fampiharana ny fepetra fisakafoana tsy misy fotony?
Ahoana no hialana amin'ny lakandrano?
Inona no atao hoe iSUP?
Inona ny rakitsoratry ny paddler?
Tantaran-tantara momba ny Kanéka sy Kayak
Torolalana ho an'ny fiompiana safidy amin'ny ankizy ao amin'ny Birao
SUP - Kayak Hybrids: Ny zavatra tokony ho fantatrao
Toro-làlana ho an'ny mpandeha any Whitewater ho an'ny Eddies, Eddy Lines ary hotakotaka
Fampitomboana ny toeram-piantsonan'ny "Whitewater Whitewater Feature Terminology"
Tambinteny amin'ny teny italiana Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny italiana
Inona no azonao atao amin'ny sehatra sosialy?
Mitazona ny tananao mandritra ny fiakarany
Ny fampanantenana sy ny fahatapahan'ny sambo
Ii desu yo - Ny fiteny Japoney tsotra
Ahoana ny fomba fitaterana Ghost na mijery maso
'Ny Tantaran'ny Santa Claus'
Dokusan: fanadinadinana manokana miaraka amin'ny mpampianatra Zen iray
Sombin-tsetsatsetsa eo amin'ny Ruby amin'ny fampiasana ny fomba fitetezana # String
Ny fomba fanaraha-maso sy ny fampihenana ny kofehy Footprint
Fahatakarana ny lalànan'ny Loham-pahefana Ohio momba ny fanavotana
Inona avy ireo karazana mpisolo anarana?
Atreho ny rivotra iainana
Ny fiandohan'ny rafitra sololontsika
Zava-miaina ara-pinoana hafa
RC Sports Games
Rahoviana no Andro Krismasy?
Parti in Grammaire
SAT Scores amin'ny fidirana ao amin'ny Metro Atlantic Athletic University Universities
Tipi Rings, ny sisa tavela tamin'ny arika Tipis
Nahoana ny toetr'andro no sarotra ny mandroso
Verida's Aida: Fanisana